Maxkamadda ugu sareysa Mareykanka oo Trump u ogolaatay inuu dhiso darbiga Mexico - BBC News Somali
Maxkamadda ugu sareysa Mareykanka oo Trump u ogolaatay inuu dhiso darbiga Mexico
Image caption Maxkamadda ugu sarreysa ayaa waxa ay meesha ka saartay go'aan Trump loogaga hor istaagayay inuu darbiga dhiso
Maxkamadda ayaa waxa ay go'aankaasi ku meel marisay shan cod halka afarna ay diideen, waxaana ay sidaa maxkamaddu ku hor istaagtay xukun uu riday xaakimka federaalka ee California kaas oo madaxweynaha ka hor istaagay inuu wax kharash ah ku bixiyo dhismaha darbiga.
Muhaajiriinta uu Maraykanka diiday oo si caalami ah loogu doodayo
Trump oo ku hanjabay inuu xirayo xadka Mexico muhaajiriinta qulqulaya awgood
Go'aanka ay Maxkamadda ugu sarreysa gaartay ayaa waxa uu ka dhigan yahay in lacagta loo isticmaali doono mashaariicda darbiga looga dhisayo gobollada California, Arizona iyo New Mexico.
Farriin uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Mr Trump waxa uu xukunka ku tilmaamay "guul weyn".
Afhayeenka Aqalka Kongareeska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa tiri: "Caawa go'aanka ay Maxkamadda ugu sarreysa ee Mareykanka ee Trump u ogolaanaysa inuu dhaqaale ka xado khasnadda milateriga si uu u isticmaalo waa dayacaad, barbiga xadka ee aanan shaqeyn doonin waxaa diiday Kongareeska waana wax aan sax ahayn. Dadkii dalkan aasaasay waxa ay dajiyeen dimuqraadiyad ay dad hoggaan u yihiin ee kama aanay tegin boqortooyo."
Midowga u dooda xuquuqda rayidka ee Ameerika ayaa waxa uu wacad ku maray inuu dacwad ka dhan ah go'aankaasi gayn doono Maxkamadda Racfaanka "si aan u hor istaagno waxyeellada soo socota ee aanan hadhow wax laga qaban karayn ee ka dhalan doonta darbiga xadka ee Trump".
Dimuqraadiyiinta ayaa waxa ay ku andacoodeen in go'aanka madaxweyne Trump uu ugu dhawaaqay xaaladda degdega ah ay ka baxsan tahay awoodaha uu u ogol yahay dastuurka Mareykanka.
Bartamahii bishan July ayey aheyd markii hay'adda Qaxootiga ee UNHCR ayaa walaac ka muujisay shuruucda cusub ee socdaalka Mareykanka ee ah in dadka magangalya -doonka ah ee Koonfurta Ameerika loo diido in ay soo galaan dalkaasi.
Hay'adda Qaramada midoobey ee qaxootiga ayaa sheegtay in shuruucda cusub ee Mareykanka ay yihiin kuwa aad u adag slamarkana halis galinaya qoysaska nugul.
Hay'adda Qaxootiga aduunka aya rumaysan in xukuumadda Washinton ay ku tumanayso sharuucda caalamiga ah ee ay horey u saxiixday.
Image caption Tirada qaxootiga ee la xayiray bishii May ayaa ahayd tii igu sareysay tan 2016
Qaar badan oo ka mid ah dadka Mareykanka imaanaya ayay hay'adu sheegtay in ay ka soo carareen cadaadis iyo rabshado islamarkana dadkaasi aysan xerooyiinka ay ku sii hakanayaan aan la siin wax dhowrid iyo ilaalin ah.
Hay'adda qaxotiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in ay la socoto in nidaamka magangalyada ee mareykanka imika uu yahay mid murugsan islamarkana ay hay'ada diyaar u tahay in ay gacan ka gaysato xalka arrintan.